भारतमा किसान आन्दोलन उत्कर्षमा,आज देशभर चक्काजाम – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
भारतमा किसान आन्दोलन उत्कर्षमा,आज देशभर चक्काजाम
| प्रकासित मिति : २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
भारतमा कृषि कानूनविरुद्ध किसानको जारी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। किसानले आज शनिबार दिउँसो १३ बजेदेखि ३ बजेसम्म पूरा देशभरी चक्काजामको घोषणा गरेका छन् । किसान नेताको तर्फबाट दिल्ली एनसीआरमा चक्का जाम गर्ने घोषणा गरिएको छ तर पनि दिल्ली पुलिस सतर्क छ । २६ जनवरीको दिन भएको हिंसालाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली प्रहरीले छिमेकी राज्यसँग जोडिएको सीमामा सुरक्षा कडा पारिदिएको छ ।
दिल्ली प्रहरीका डिसीपी क्राइम चिन्मय विस्वालले टिकरी, सिंघु र गाजीपुर सीमामा सुरक्षा बढाइदिएको जानकारी दिएका छन् । दिल्लीभित्र पनि सुरक्षाका कडा प्रबन्ध मिलाइएको छ । नयाँ दिल्लीका डिसीपीले दिल्ली मेट्रोका अधिकारीलाई पत्र लेखेर आवश्यकता पर्दा राजिव चोक, केन्द्रीय सचिवालयसमेत इलाकाका १२ मेट्रो स्टेशनमा शर्ट नोटिसमा बन्द गर्नका लागि तयार हुन भनेको छ ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार किसानसँग कुनै कुरा हुन सकेको छैन । यसबारे अन्य माध्यममार्फत् किसानले दिल्लीमा चक्का जाम नगर्ने पत्ता लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् । किसानले दिल्लीमा चक्काजाम नगर्ने घोषणापश्चात् पनि प्रहरी कुनै पनि प्रकारको स्थितीसँग जुध्नका लागि पूर्ण रुपमा तयार भएको जानकारी दिएको छ ।
ओली सरकार छिट्टै पतन हुन्छ: पूर्वमन्त्रि जनार्दन शर्मा
दाऊन्नेमा दुर्घटना हुँदा ३१ जन घाईते। २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
चितवनमा दुर्घटना बढ्दै: आज मात्र दुई दुर्घटनामा ७ को मृत्यु दर्जनौं घाईते। २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
चितवनको भरतपुरमा म्याजिक आफै अनियन्त्रित भई खाल्डोमा खस्दा दुईको मृत्यु, ७ जना घाईते २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
मूल्यवृद्धि आकासिदै ! २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
अब दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध ! २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
दिनहुँ हराउँछन् १० जना बालबालिका २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
पटक पटक म्याद थपिएको ठिमुरामा निर्माणधीन पक्की पुल भत्कियो। २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
विद्यालयलाई पोशाक सहितकाे सहयोग प्रदान। २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
धोबीखोलामा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता ल्याइने २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
प्रेस चाैतारी र जनपत्रकार संगठन चितवन बीच पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति। २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
यस बर्षको फागुपर्व तथा नयाँ बर्ष घरमानै बसेर मनाउन प्रशासनको आग्रह २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन २४ माघ २०७७, शनिबार ०५:०६